सगरमाथाको नाम फेर्ने रे जी-न्यूजले तपाईं यसलाई के भन्नु हुन्छ केपीजी ? : प्रचण्ड «
सगरमाथाको नाम फेर्ने रे जी-न्यूजले तपाईं यसलाई के भन्नु हुन्छ केपीजी ? : प्रचण्ड
प्रकाशित मिति : 13 January, 2021 3:55 pm
उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ पनि मागेका छन्। ‘मेरो प्रश्न- यसबारे के भन्नु हुन्छ केपीजी ? तपाईं यसलाई के भन्नु हुन्छ ? मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन फेरि यो भ्रम नहोस्।’
देश र संविधान धरापमा पर्दा ओली बिजेताजस्तो गरेर हाँसेको उनले बताए। ‘नराम्रो काम गर्दा त ड’र मान्ने हुनुपर्ने तर उहाँ खुसी हुनुभएको छ। भाङ खाएर नाचेकोजस्तो ताण्डप नृत्यजस्तो,’ उनले भने।